MYU SHADAN: Download လုပ်ရန် မသိမဖြစ်နည်း (မဖြစ်မနေဖတ်ရန်)
ကဲ ကျွန်တော့်ရဲ့ အကောင့်နဲ့ ဖိုင်တွေအားလုံးကိုတော့ Mediafire ဆိုက်ကကော ifile.it ကလည်းပဲ domain name ပြောင်းတဲ့အတွက်ကြောင့် (ifile.it to filecloud.io)ဖိုင်တွေအားလုံးပါသွားပါတယ်။ အဲ့တော့ ကျွန်တော့်အနေဖြင့် ဒီတစ်ခါရုတ်တရက် မသိနိုင်တဲ့နည်းလမ်းတစ်ခုနဲ့ ဖိုင်တွေကို တင်ပေးပါ့မယ်။ အဲ့အတွက်လည်း အဆင်ပြေကြလိမ့်မယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ်။ အဲ့တော့ အောက်ကနည်းအတိုင်း သွားကြရအောင်ဗျာ. လွယ်မယောင်နဲ့ နည်းနည်းရှုပ်တယ်လို့တော့ မထင်စေချင်ပါဘူး။ အကောင့်ကိုလဲ ပိတ်ပစ်လိုက်ပါတယ်။ နှမျှောပေမယ့် တစ်နည်းမဟုတ်ရင် နောက်တစ်နည်းနဲ့ ပြောင်းပြီးတော့ Download လုပ်ကြတာပေါ့ဗျာ . မဟုတ်ဘူးလား. အခုလုပ်နည်းကို ကျွန်တော် ဓါတ်ပုံနဲ့ကော video နဲ့ပါ ရှင်းပြပေးပါ့မယ်. အခုတော့ စိတ်နည်းနည်း ညစ်သွားတယ်ဗျာ. ifile ရော mediafire ကောပါဆိုတော့ အီစလံကို ဝေသွားတာပဲ။
ခုဆိုက်ကို download လုပ်နေကြသူများကတော့ မသိပေမယ့် မကြာခဏဆိုသလို အမေးခံနေရပါတယ်. ဘယ်လို download လုပ်မလဲ ကိုညီနေမင်း။ software လဲ မဟုတ်ဘဲနဲ့ လျှောက်တင်ထားတယ်. Download လုပ်လို့လဲမရဘူး အဲ့လိုမျိုးပြောကြပါတယ်. တကယ်တော့ Download လုပ်မတတ်တာပါ။ လုပ်မရတာမဟုတ်ပါဘူး။ အဲ့တော့ ဘယ်လို Download လုပ်ရမလဲပြောပြပါ့မယ်. ပထမဦးစွာ မိမိ Download လုပ်လိုသည့် link (၃) မျိုးထဲမှ တစ်မျိုးကို နှိပ်ပါ။ အထက်ပါပုံကဲ့သို့ ပေါ်လာပါမည်။ ၅ စက္ကန့်စောင့်လိုက်ပါ။ ပြီးလျှင် မြှားပြထား သည့် နေရာက SKIP ADD ဆိုတဲ့ စာလုံးကိုနှိပ်လိုက်ပါ။ အဲ့ဒါဆိုရင် မိမိ Download လုပ်လိုတဲ့ ဆိုက်ထဲကိုရောက်သွားပါပြီ။ အဲ့ဒီ့အဆင့်ရောက်လျှင် အောက်က အဆင့်အတိုင်း ဆက်လုပ် လိုက်ရပါမယ်။
ပထမဦးဆုံး Download လုပ်ပါ။ (password လိုအပ်လျှင် konyinaymin@gmail.com ကိုထည့်ပါ။)
ရလာသည့်ဖိုင်ကို Rename ပေးပြီး နောက်ဆုံးမှာ .rar ဆိုပြီးတော့ ထပ်ပြီးတော့ ထည့်ပေးရပါ့မယ်။ သဘောကတော့ format type ကို မသိစေချင်လို့ ဖျက်ထားတဲ့သဘောပါပဲ။ အဲ့တော့ ဖျက်ထားခဲ့တဲ့ format ဖြစ်တဲ့ .rar [ဒေါ့အာအေအာရ်] ကိုထည့်ပေးလိုက်ပြီး ဖိုင်ဖြေလိုက်ပါ။ တကယ်လို့ password တောင်းခဲ့ရင် ကျွန်တော့်ရဲ့ email လိပ်စာဖြစ်တဲ့ konyinaymin@gmail.com ကို ထည့်ပေးလိုက်ပါ။ ဒီဆိုက်နဲ့ပတ်သက်လာလို့ ဘယ်နေရာမှာပဲ လျှို့ဝှက်နံပါတ် တောင်းပါစေ. ကျွန်တော့်ရဲ့ အီးမေးလ်လိပ်စာ ကိုသာထည့်ပေးလိုက်ပါ။ အဆင်ပြေသွားပါလိမ့်မယ်။ အခုတင်ပေးလိုက်တဲ့ HJ split ကိုလည်း သုံးနည်းပါ တင်ပေးပါ့မယ်။ နောက်ပိုင်းတော့ hjsplit နဲ့ နှစ်ပါးသွားဖို့ရှိပါတယ်။ အားလုံးကို နားလည်အောင် အသေးစိတ်ရှင်းပြပေးပါ့မယ်။ မခက်ပါဘူး။
Filecloud | Mediafire | Minus
Posted by myu shadan at 11:09 PM